प्रिमिएर लिगका यी खेलाडी बार्सिलोना फर्काउन पिकेको सिफारिस!! - Experience Best News from Nepal
बार्सिलोनाले ढिलो चाडो भए पनि स्पेनिस खेलाडी एबं बार्सिलोना डिफेन्डर जेराड पिकेको विकल्प खोज्नु पर्ने छ, तर पिके आफ्नो विकल्प खोज्नु भन्दा बार्सिलोनाका निमित खेलाडी सिफारिस गरेका छन् । ला लिगा खेलहरु रद्द भएका छन् र स्थिरता रही रहे अंक तालिकामा शिर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोनाले ला लिगाको उपाधि जित्ने छ ।
हाल ब्यबस्थापक र खेलाडी विच बार्सिलोनामा अनियमितता फैलिएको छ यस्तै विच बार्सिलोना डिफेन्डर जिराड पिके आफुले नै टिमका निमित खेलाडी सिफारिस गरेका छन । अहिले टिमले भोगी रहेको समस्या राइट ब्याकको रहेको पिकेले बताएका छन् ।
पिकेले बार्सिलोनाका सर्जियो रोबेर्टोको विकल्पमा इन्गिश प्रिमिएर लिग वोल्भरह्यामटन मार्फत खेल्दै आएका एडमा ट्राओरे रोबेर्टोको विकल्प हुने बताएका छन् । निस्फिक्री जवाफ दिन माहिर पिकेले आफ्नो टिममा पुर्बी बार्सिलोना (ला मासिया) खेलाडी ट्राओरे माथि आफ्नो सिफारिस क्लबमा गरेका हुन् । वोल्भरह्यामतनसंग २०२३ सम्म ट्राओरेको सम्झौता रहेको छ र उनले ठुला क्लबसंग खेल्न इच्छा ब्यक्त समेत गरेका छन् । २०१५ मा बार्साले त्ट्राओरेलाई वोल्फ्स पठाएको थियो भने ट्राओरेले आफुलाई मड्रिड सुम्पिन सक्ने समेत स्पेन अनलाइनले बताएको छ ।
समर ट्रान्सफरमा बार्सिलोनाले पिकेको मागलाई सम्बोधन गर्ने समेत उक्त अनलाइनले बताएको छ ।
२००० पश्चात यूरोपियन च्याम्पियन लिग अन्तिम १६ मा ५ गोल गर्ने एक मात्र खेलाडी मेस्सी, कसलाई र कहिले !!
Adama TraoreBarcelonaGerard Pique